ILBC - IGCSE & A LEVEL SCHOOL
ILBC Preschool Remote Learning Programme �...
I am happy to introduce our ILBC website to you and to all readers, who are interested in education. As we equip our children with the essential knowledge and skills to thrive in life, we would like to share with you some information about our school. Browsing through the site you will learn more about us: our mission, our history, the different branches across the country, our organization, the facilities we provide, our calendar year, the curriculum we have developed for our primary and secondary levels, our admission policy, and employment opportunities with us. We have also includedaphoto gallery where you will findawide range of co-curricular as well as extra-curricular activities done over the year. We are proud of our school and our achievements over the years. And should you need more information, you are most welcome to contact us.
ILBC seeks to foster the development of the whole child, one who is academically well-prepared, socially responsible, culturally sensitive, and personally fulfilled. The ILBC mission statement focuses on “Progress through Education”…
Well-planned syllabus with programmes of activities such as excursions, social events, sports, etc.Trained, qualified and experienced local and overseasteachers (native English speakers)...Read More
ILBC was established on May 2, 1995 withasmall language class of twenty students. Since then, it has gained the trust and support of the populace, and has now become the leading...Read More
The governing body of the organization is the Board of Education, which consists of forty-three members including the managing director, the chief trainer, the superintendent, the principal,...Read More
QUICK FACTS ABOUT ILBC
Well-Trained 1700 Teachers
Edexcel Approved Centre Number 95909
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ကျောင်းပရဝုဏ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Technology Integrated Learning Programme ဖြင့် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်များသင်ကြားမှုကို Online ဖြင့်သင်ကြားပို့ချပြီး၊ ဂီတ၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ လက်တွေ့ခန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ပြင်ပလေ့လာရေးအစီအစဉ်များ တို့ကို ကျောင်းပရဝုဏ်သို့ လာရောက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဇွန်လတွင် တစ်ပတ်လျှင် (၂)ရက်၊ ဇူလိုင်လတွင် တစ်ပတ်လျှင် (၃)ရက် နှင့် သြဂုတ်လတွင် တစ်ပတ်လျှင် (၄) ရက် တိုးမြှင့်တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါက စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ တစ်ပတ်လျှင် (၅)ရက် ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်မှန်းဆမရနိုင်သော ကိစ္စများကြောင့် ကျောင်းပရဝုဏ်သို့ လာရောက်ရန် အဆင်မပြေပါက TIL Program အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Online သီးသန့် ဆက်လက်တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်လိုသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့် TIL Program ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း Online မှ သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းလခပြောင်းလဲခြင်းရှိမည်မဟုတ်ဘဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းလခ နှုန်းထားများအတိုင်းသာ ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပရဝုဏ်သို့ လာရောက်တက်ရောက်ရန် ‌ရွေးချယ်သော ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းလခနှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောက်ပါ Link တို့မှတစ်ဆင့် ကျောင်းအပ်နှံနိုင်ပါသည်။
New Students: https://bit.ly/AY_22-23_New_Stds_Reg
Existing Students: 2021-2022 ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့သော ILBC TIL ကျောင်းသားများသာ ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။
Nay Pyi Taw: https://bit.ly/AY_22-23_Reg_NPT
School Rules & Regulations များကို မကြာမီထပ်မံအသိပေး ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Existing Student များအနေဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ Microsoft Stream Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
After Live Link: https://bit.ly/ILBC_Info_Session_Video_7May22
ရန်ကုန် ILBC ကျောင်း၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းလခကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အခြားသော ILBC ကျောင်းခွဲများအတွက် ကျောင်းလခကိုသိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့ရှိ ILBC ကျောင်းများတွင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ်များ (ရန်ကုန်)
Secondary One to Secondary Six – တော်ဝင်ပုလဲ (ကျိုက္ကဆံ)၊ ILBC ကျောင်း၊ (၅၁-G/2)၊ တော်ဝင်ပုလဲအိမ်ရာ။
Kindergarten to Primary Six – အမှတ် (၁၈၀)၊ သုနန္ဒာ (၉)လမ်း၊ သုမင်္ဂလာ အိမ်ရာဝင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (မန္တလေး)
မ (၂/၁ က + ၆ ဆ)၊ ၆၄ လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် ၄၄ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၂) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (နေပြည်တော်)
သံတမန်ဇုန်အနီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ပျဥ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (မြစ်ကြီးနား)
အမှတ် (၁၁)၊ ဇော်ဂျွန်းလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (လားရှိုး)
အမှတ် (၁၁/ခ)၊ လွယ်ကန်မိန်းရပ်၊ ဓမ္မရိပ်သာလမ်း၊ နယ်မြေ (၁၆)၊ ရပ်ကွက် (၈)၊ လားရှိုးမြို့။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (တောင်ကြီး)
အမှတ် ၂၇၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်း နှင့် ကမ္ဘောဇလမ်းထောင့်၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။
တက်ရောက်ရမည့် ပရဝုဏ် (မြိတ်)
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ လမင်းခြံ၊ လမင်းရပ်ကွက်၊ ရေပုံအိမ်ရာ၊ မြိတ်မြို့။
2022 – 2023 Academic Year – Registration Information
The academic year 2022-2023 will commence on campus on June 3, 2022 utilizing the Technology Integrated Learning (TIL) approach. Academic subjects will be taught online; however, students will have to come to campus for special subjects such as music, sports, fine arts, practicals and outdoor learning programmes. Campus schooling will be done progressively:2days in June,3days in July and4days in August. Should everything go smoothly as planned, we will arrange foraregular 5-day school in September. However, should unforeseen circumstances prevent students from coming to school, learning will continue with TIL programme.
Students, who opt for online learning only will be able to do so with the same school fees exacted in 2021-2022 academic year. School fees for on-campus learning will be the same as that of 2019-2020 AY.
Existing Students: Only 2021-2022 ILBC TIL students can fill up this form.
School Rules & Regulations will be announced soon.
Existing students can view the detailed information in the following Microsoft Stream link.
Here is for Yangon School Fees (2022-2023 Academic Year). Please inquire about the school fees for other branches at the respective schools.
School Venues (Yangon)
Secondary One to Secondary Six – 51-G/2, Taw Win Pale, Taw Win Pale Housing, ILBC, Kyaikkasan.
Kindergarten to Primary Six – No 180, Thu Nandar 9th St, Thumingalar Housing, Thingangyun
School Venue (Mandalay)
Ma-(2/1 Ka+6 Salain), 64rd Street, Bet: Theikpan Road x 44rd St., Mahar Myaing2Ward, Mahar Aung Myay Tsp., Mandalay, Myanmar.
School Venue (Nay Pyi Taw)
Near Diplomat Zone, Dekkhina Thiri Township, Pyinmana Tsp., Nay Pyi Taw, Myanmar.
School Venue (Myitkyina)
No.(11),Zawkyun St., Thidar Block, Myitkyina.
School Venue (Lashio)
No.(11/kha), Lwe Kan Mein Block, Dhamma Yeikthar Street, Region(16), (8) Quarter, Lashio.
School Venue (Taunggyi)
No.27, Corner of Yangyi Aung St., & Kanbawza St., Yayayekwin Qtr., Taunggyi, Myanmar.
School Venue (Myeik)
Maharsi Sarsana Yeikthar St., La Min Yard, La Min Qtr, Yaypone Estate, Myeik.
📧 Email – support@ilbc.edu.mm, recdept@ilbc.edu.mm
📲 Phone – 09 777096000, 09 777098000, 09777711112
📲 Hotline (Mandalay) – 09777711116
📨 Viber – 09 777711112
📩 ILBC Official Facebook Page Chat Box – https://www.facebook.com/ILBCEDU/
👥 ILBC Official Technical Support Facebook Closed Group –
ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ၊ တူလေး / တူမလေးတွေကို Summer ကာလမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့ စုံစမ်းနေတဲ့သူတွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့်
ILBC TBL – EPC အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို မတ်လ ၁၈ရက် (သောကြာနေ့)မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာ
Technology Based Learning – နည်းပညာအသုံးပြုသင်ကြားပေးတာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တင်မကဘဲ Internet ရတဲ့ နယ်မြို့လေးတွေက ကလေးတွေအားလုံး တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ILBC TBL-EPC သင်တန်းမှာ ကလေးအသက် (၅)နှစ်အရွယ်ကနေစပြီး တက်လို့ရပါတယ်။
✓ သင်တန်းစမည့်နေ့ – မတ်လ ၁၈ရက် (သောကြာနေ့)
✓ သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်နေ့ – မေလ ၁၈ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
✓ သင်တန်းရက် – တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ
✓ သင်တန်းချိန် – မနက် ၉နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂နာရီအထိ
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက English လိုနားလည်ပြီး ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်၊ ပြောတတ်ဖို့ English4skills ကိုကျေညက်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ချင်တဲ့ကလေးတိုင်း ILBC Summer TBL-EPC သင်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ILBC Summer 2022 TBL – EPC သင်တန်းကို တက်ရောက်လိုတဲ့ ကျောင်းသားအသစ်များ၊ 2021 – 2022 ILBC TBL – EPC (Batch 2) မှလွဲ၍ Student ID ဆယ်လုံးရှိသော ILBC ကျောင်းသားများအားလုံး အောက်ပါ Link ကနေတဆင့် Register ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – ILBC TBL- EPC (Batch 2) တက်ဖူးသော ကျောင်းသားများအတွက် Registration Form ကို ကျောင်းသား Outlook mail နှင့် မိဘ Email သို့ ပေးပို့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှစတက်မယ့်သူတွေအတွက် ILBC TBL – EPC အတန်းတွေအကြောင်း အားလုံးသိရအောင် အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်။
✔ ILBC Summer 2022 (TBL-EPC) အတန်းတွေကို ဘယ်နေ့စဖွင့်မှာလဲ?
18. 3. 2022 (Friday)မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်နိုင်မလဲ??
ILBC Weekend EPC အတန်းများမှ ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အသက် (၅)နှစ်နှင့် အထက်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံး တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
“Microsoft Education” ကိုအသုံးပြုပြီး Technology Based Learning ဖြင့် အွန်လိုင်းကနေတဆင့် သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
✔ Placement Test ရှိပါသလား??
EPC ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် Placement Test ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျောင်းသားသစ်များအတွက် နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အတန်းစဥ်အပေါ်အခြေခံပြီး အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မယ့် Level မှာ သင်ယူရပါမယ်။
✔ ILBC Summer TBL – EPC ရဲ့အတန်းချိန်တွေကရော?
တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ တစ်ရက်လျှင် – မနက် (၉း၀၀)နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂း၀၀)နာရီ ထိသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ ILBC Summer TBL – EPC အတွက် သင်တန်းကြေး ဘယ်လောက်လဲ??
ယခင် Batch များကဲ့သို့ ကျောင်း၀င်ကြေး (Registration Fees) (၅၀၀၀၀)ကျပ်ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ သင်တန်း Level တစ်ခု အစအဆုံးအတွက် သင်တန်းကြေး (300,000) ကျပ် (သုံးသိန်းကျပ်)သာ ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေးကို (၂)ကြိမ်ခွဲပြီး ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
✔ “Technology Based Learning – TBL” နဲ့သင်ကြားတဲ့အခါ ဘာ Device တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ??
Mobile (Android or iOS) ၊ Tablet ၊ PC or Laptop ၊ MacBook တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အောက်ပါ link ထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
☐ ILBC TBL – EPC သင်တန်းကာလပြီးဆုံးတဲ့အခါ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအတွက် သင်တန်းပြီးဆုံးခြင်းလက်မှတ်(Certificate) ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
☐ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ နောက် Level တစ်ခုကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
☐ ကျောင်းသားတစ်ယောက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။
✅ Registration Form တွင်ဖြည့်ထားသော Email ထဲကို Confirmation Mail ဝင်လာတဲ့အခါ စာရင်းပေးသွင်းမှု အောင်မြင်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။
📩 ILBC Official Facebook Page Chat Box – https://www.facebook.com/ILBCEDU
☎ 09 400777780, 09400777790 ကို
ILBC Preschool Remote Learning Programme ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင်စ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်တွင် တက်ရောက်လိုသည့် ILBC Preschool ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀)ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါ Link မှတဆင့် Online စနစ်ဖြင့် ပဏာမစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Registration Form ဖြည့်သည့်အခါ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီတိုင်း School Email ကိုသုံးပြီး ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။ နောက်ထပ် ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက် ဖြည့်စွက်လိုပါက ထိုကျောင်းသားရဲ့ School Email ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ယခင်ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ ILBC Preschool Remote Learning Programme အစီအစဉ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားများသည် ယခုနှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းစရာမလိုဘဲ၊ ယခု ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများသည် အတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်း အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေး (၄၀၀၀၀ိ/-) ကျပ် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ပေးသွင်းရမည့် ‌ငွေစာရင်း နံပါတ်များကို ထပ်မံကြေညာပေးပါမည်။)
ILBC Preschool Remote Learning Programme နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို မိဘ Email များထံသို့လည်း ပို့ပေးထားပါသည်။
အသေးစိတ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက အောက်ပါတို့မှတဆင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ILBC KKS – 09 400777780/ 09 400777790
ILBC Nay Pyi Taw – 067 422 170, 067 422171
ILBC Lashio – 09 2560 72478
ILBC Myeik – 09 8627077
ILBC Myitkyina – 09 429326678
ILBC Taunggyi (IGCSE) – 081 2124885, 206644
ILBC Mandalay – 09 777711115/ 09 777711116
ILBC Monywa – 09 444413221, 09 444413220
ILBC Official Facebook Page – https://www.facebook.com/ILBCEDU